Golf baolina, Range Golf baolina, Golf Tour baolina - Vensen
2 Ball Range Bola
2-PC Tour Ball
VENSEN GOLF dia orinasa izay monopolizes ny orinasa mpamokatra entana, famolavolana, ny fampandrosoana ary ny varotra isan-karazany ny Golf baolina. Ny orinasa manarona ny faritra 5, 000 metatra toradroa. Ny orinasa no misy ao Jiangsu Province, Chine, amin'ny fitaterana sy ny tsara mety tontolo iainana ara-jeografika.
Ny orinasa dia mampiasa ny vahiny Ampidiro ny fitaovana, fahazoan-dalana akora, ary manana batch ny matihanina mahay za-draharaha ara-teknika manokana, mba hahazoana antoka fa Golf baolina rehetra avy amin'ny orinasa manana kalitao avo sy azo antoka.
Torohevitra ho an'ireo vao manomboka mampiharo golf
Matoky an'i Shina ary tsy mila matahotra
Omeo anay ny mailaka dia ho isan 'andro fanavaozana ny zava-nitranga farany, tamin'ny an-tsipiriany!